Hydrofluoroether fanadiovana elektrônika ho an'ny ampahany China Manufacturer
Description:Electrical Insulation HFE,Fanadiovana ho an'ny antonony,HEF fitaovana elektrika tsara ho an'ny ampahany
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny antonony > Hydrofluoroether fanadiovana elektrônika ho an&#39;ny ampahany
HFE hydrofluoroether Fahasalamana tsara ho an'ny anton-tsarimihetsika
Hydrofluoroether rejuvenant Regeneration: Azo afindra sy havaozina izy io.
Ary vokatra avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitokana. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Electrical Insulation HFE Fanadiovana ho an'ny antonony HEF fitaovana elektrika tsara ho an'ny ampahany